मायामा जे पनि गर्न तयार हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्तिहरु, कतै तपाई नि पर्नुभयो कि ? | सुदुरपश्चिम खबर
मायामा जे पनि गर्न तयार हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्तिहरु, कतै तपाई नि पर्नुभयो कि ?
माया हरेक कोहीलाई हुने गर्दछ । माया एक खुशीको आभास हो । जसलाई हरेक कोई एक न एक चोटी आफ्नो जीन्दगीमा महसुस गरेको नै हुन्छ । तर कयौँ यस्ता व्यक्ति पनि छन् जो मायामा अत्यन्तै सिरियस हुने गर्दछन् । र आफुले मन पराएको व्यक्तिलाई वा आफ्नो पार्टनरको लागी जे पनि गर्न तयार हुन्छन् ।
आउनुहोस् ती ४ राशिका बारेमा जानौँ जो आफ्नो मायामा मर्न पनि तयार हुन्छन्।
यदि कोही कसैलाई कर्कट राशि भएका व्यक्तिसँग माया बसेको छ भने सम्झनुहोस् कि उनीहरु अत्यन्तै भाग्यशाली छन् । कर्कट राशिका व्यक्तिहरु अत्यन्तै इमान्दार हुने हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई सबैभन्दा बढि मन पराउँछन् ।
यदि कन्या राशिका व्यक्ति कसैको प्रेममा पर्छन् भने उनीहरुले आफ्नो प्रमीलाई बाहेक अरु कसैलाई पनि महत्व दिदैनन् । यिनीहरुको लागी सबै उसको पार्टनर नै हुने गर्दछ।
कुम्भ राशिका व्यक्ति कुनै पनि हालतमा आफ्नो प्रमीसँग दुरी बनाएर बस्न सक्दैनन् । यिनीहरु जुन व्यक्तिसँग भावनात्मक रुपमा जोडिन्छन् उनीहरु प्रति सँधै इमान्दार हुने गर्दछन् । यस राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो पार्टनरलाई यति माया गर्छन् कि उसको लागी जे पनि गर्न तयार रहन्छन्।
मीन राशिका व्यक्तिले जसरी आफ्नो साथीसँग सम्बन्ध बनाउँछन् त्यस्तो अरु कसैले पनि बनाउँदैनन् । यी राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो प्रेमीलाई लिएर अत्यन्तै केयरींग र भावुक किसिमका हुने गर्दछन्। नयाँ पुस्ता बाट सभार
त्रिविको हाल सञ्चालित कुनै पनि परीक्षा नरोकिने
गर्भवती अवस्थामा धेरै सुत्ने गर्नुहुन्छ ?